ကလေးတစ်ယောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မျိုးရိုးဗီဇ နဲ့ ပျိုးထောင်မှု ဘယ်သူပိုအရေးပါလဲဆိုတဲ့ အငြင်းအခုံကြားက တတိယဇာတ်ကောင် - Hello Sayarwon
ကလေးတစ်ယောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မျိုးရိုးဗီဇ နဲ့ ပျိုးထောင်မှု ဘယ်သူပိုအရေးပါလဲဆိုတဲ့ အငြင်းအခုံကြားက တတိယဇာတ်ကောင်
ကလေးတစ်ယောက်ကို အကောင်းဆုံး ကြီးထွားစေချင်တာ၊ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေချင်တာ၊ ဉာဏ်ကောင်းစေချင်တာတွေဟာ မေမေ့မေတ္တာရဲ့ အတောမသတ်နိုင်တဲ့ လိုအင်တွေပါ။ ဒါက မိခင်တွေရဲ့ အဖြူရောင် အတ္တဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
မိခင်တိုင်းဟာ တစ်ချိန်လုံး ဆော့နေတဲ့ ကလေးကို ကြည့်ရတာကို စိတ်ညစ်လိုက်တာလို့ ညည်းတွားနေရင်တောင် ငါ့ကလေး ကျန်းမာလှရဲ့ဆိုပြီး ရင်ထဲက ကြိတ်ပျော်နေတတ်ကြသူတွေပါ။ မေမေတွေ တကယ်စိတ်ညစ်တာက ကိုယ့်ကလေး သူများကလေးလို မထွားမှာ၊ ဉာဏ်မကောင်းမှာ၊ မကျန်းမာမှာကိုပေါ့။
ဒီတော့ ကလေးကို အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်စေချင်တဲ့ မေမေတိုင်း သိချင်နေမယ့် မေးခွန်းလေး တစ်ခု ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကလေးတစ်ယောက် အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့က မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ ဆိုင်လား။ ပျိုးထောင်ပေးမှုနဲ့ ဆိုင်လားဆိုတာကိုပေါ့။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါတာက မျိုးရိုးဗီဇလား………. ပျိုးထောင်မှုလား………….
မျက်လုံးလေးတွေက အမေနဲ့တူတယ်နော်။ မျက်နှာကျလေးက အဖေနဲ့တူတာ။ စကားပြောတော့ကျ သူ့အဖိုးလိုမျိုးနော်။ စိတ်ဓာတ်ကျ သူ့အဖွားလိုပဲ ညှာတာတတ်တယ်။ တူမှာပေါ့ မျိုးရိုးဆိုတာ ဘယ်တိမ်ကောမှာလဲ ဆိုပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကို မြင်ရင် ပြောတတ်ကြတာ ကြားဖူးမှပေါ့။
တကယ်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်၊ အပြောအဆို၊ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်တွေက မျိုးရိုးထဲမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ တူတာ ထုံးစံပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း မျိုးရိုးလို့ခေါ်တာပေါ့။
ဒါဆို ကလေးတစ်ယောက် ဉာဏ်ကောင်းတာ၊ ထွားကြိုင်းတာကရော မျိုးရိုးပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ငယ်စဉ်ကစလို့ လုံလောက်တဲ့ အာဟာရတွေပေးမယ်။ အကောင်းဆုံး ပျိုးထောင်ပေးမယ်ဆိုရင် ကလေးက အကောင်းဆုံး ကြီးပြင်းလာမှာပါ။ ကလေးတစ်ယောက်က ငယ်စဉ်မှာ မိဘဆွေမျိုးတွေရဲ့ အပြုအမူ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ တူနိုင်ပေမယ့် အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ သူကျင်လည်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်က အပြုအမူ အလေ့အထတွေကို သင်ယူကြပါတယ်။ ဒါက လေ့လာမှုရလဒ်​တွေအရ သိရတဲ့ အထောက်အထားတွေပါ။
ကလေးတစ်ယောက် အကောင်းဆုံး ကြီးပြင်းနိုင်စွမ်းအပေါ်မှာ ဒီအချက် နှစ်ခုစလုံးက ထိုက်သင့်သလောက် သက်ရောက်မှု ရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့ ငြင်းလို့မရတဲ့ အမှန်တရားပါပဲ။
ကလေးတစ်ယောက် အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖို့အတွက် အဖြေ
ကလေးကိုသူများကလေးတွေလို မထွားမှာ စိုးရိမ်တယ်။ ဉာဏ်မကောင်းမှာစိုးရိမ်တယ်ဆိုရင် ကလေးဘဝကတည်းက သေချာ ပျိုးထောင်ပေးတာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ။
ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပထမ ၅ နှစ်တာမှာ ဦးနှောက်ဖွံဖြိုးမှု၊ အမြင်အာရုံ ဖွံဖြိုးမှု၊ ကိုယ်ခံအားဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
ဒီကာလမှာ မေမေတို့က ကလေးကို
ကိုယ်ခံအားကောင်းစေမယ့် HMOs (Human Milk Oligosaccharides) လို့ခေါ်တဲ့ အာဟာရဓာတ် တစ်မျိုးကို ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ ဒီ အာဟာရဓာတ်က ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေလို့ စားလိုက်သမျှတိုင်းကို အာဟာရဖြစ်စေမှာပါ။ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောကင်းပြီး ကျန်းမာတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပေါ့။
HMOs နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ရောဂါပိုးတွေ အန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးပြီး အသက်ရှူစနစ် ကို ကျန်းမာစေတာပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကြီးထွားဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့ကလေးအတွက် အာဟာရတွေ လုံလောက်စွာ ရရှိစေဖို့ အူနံရံတွေ ကျန်းမာအောင် အားဖြည့်ပေးမယ့် အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားတွေ (Probiotics (Lactobacillus) ) ပါ။ ဒီ အာဟာရဓာတ်က ကလေးတွေအတွက် အရေးပါပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားကိုလည်း အားဖြည့်ပေးတယ်လေ။
ဒါဆို ဉာဏ်ကောင်းဖို့ကရောဆိုတော့ ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အမြင်အာရုံကို ဖွံ့ဖြိုးစေတယ်လို့ ခဏခဏ ကြားမိနေနိုင်တဲ့ DHA ပေါ့။ DHA က Omega-3 fatty Acids တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့အမြင်အာရုံကို အကောင်းဆုံး ဖွံ့ဖြိုးစေမှာပါ။
ဒါတွေအပြင် ကလေးကို အရိုးနဲ့ သွားတွေ သန်မာစေဖို့ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ARA လို့ခေါ်တဲ့omega-6 polyunsaturated fatty acid၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ အိုင်အိုဒင်း၊ ပရိုတင်း နဲ့ ဗီတာမင်တွေ ပြည့်ဝအောင် ကျွေးမွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးက ကျန်းမာပြီး အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှာပေါ့။
ဒါတွပြည့်စုံအောင် ဘယ်ကရမလဲဆိုတော့ အခု ဈေးကွက်ထဲမှာ မေမေတို့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မယ့် အာဟာရဖြည့်နို့တွေကနေပေါ့။ ဒီအာဟာရဖြည့်နို့တွေထဲမှာ အခုပြောခဲ့တဲ့ အာဟာရတွေစုံလင်စွာပါပြီး အချိုနည်းတာမျိုးကိုတော့ ဂရုစိုက်ရွေးချယ်ဖို့ လိုမယ် မေမေရေ။
ကလေးတစ်ယောက် အကောင်းဆုံးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဉာဏ်ရည်ထက်စေဖို့ကို ညီမျှခြင်းချကြည့်ရင် ထွက်လာမယ့်အရာက
မျိုးဗီဇ + ပျိုးထောင်မှု + အာဟာရဖြည့်နို့ = လိုအပ်ချက်ကင်းတဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Nature vs. Nurture https://courses.lumenlearning.com/atd-hostos-childdevelopment/chapter/nature-vs-nurture/ Accessed Date 21 October 2020
Perceptions of nature, nurture and behaviour https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4513026/ Accessed Date 21 October 2020
What Happens When You Tell Kids They’re Just Like Dad https://www.fatherly.com/health-science/nature-vs-nurture-child-development/ Accessed Date 21 October 2020
ကလေးများအတွက် ဒိုင်းသဖွယ် ကာကွယ်ပေးမယ့် နို့တစ်ခွက်
ကလေးကို အမြင်အာရုံ ကောင်းစေမယ့် အာဟာရဓာတ် ။ ။
သားသားမီးမီးတို့အတွက် မှန်ကန်ပြည့်ဝတဲ့ အာဟာရ
သားသားမီးမီးတို့ကို ပျိုးထောင်ရတာ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးပါ